Gbasara Anyị | Qingdao Florescence Co., Ltd.
Qingdao Florescence Co., Ltd. bụ ọkachamara n'ime tube emeputa na n'elu 26 afọ ngwaahịa ahụmahụ. Anyị ngwaahịa tumadi gụnyere eke roba na butyl roba n'ime akpa maka ịnyịnya ígwè, ọgba tum tum, ugbo ala, engineering akpa na roba flaapu, na-na-na ndị inflatable roba snow tube, igwu mmiri ise n'elu akpa, egwuregwu akpa wdg anyị ụlọ ọrụ nwere 500 ọrụ (gụnyere 12 agadi injinia , Ndị na-ajụ 60 na ndị ọkachamara na ndị ọrụ aka ọrụ).
A na-ahazi ngwaahịa florescence, rụpụta ya, ma nwalee ya site na ISO9001, wee gafere CCC, CIQ, SONCAP, PAHS test. A na-emepụta ngalaba ọ bụla ma na-enyocha ya kpamkpam, a ga-enyocha tubes niile na onu ikuku maka awa 24.
Onwem na elu emeputa, ule na R & D akụrụngwa, Florescence-aghọ a Chinese na-eduga akpa soplaya na kasị dị ogologo akụkọ ihe mere eme, kasị mmepe, kasị ukwuu isi obodo & technology na ndị kasị asọmpi ngwaahịa. Dị na ọdụ ụgbọ mmiri nke Qingdao, Florescence nwere ike ịzaghachi n'ụzọ dị irè na ihe ọ bụla chọrọ ngwa ngwa nke tubes dị n'ime na flaps na ngwaahịa ya niile.
A na-enyefe ngwaahịa anyị karịa mba 20 n'ụwa niile, nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ kwadoro. Ọzọkwa, anyị gafere ISO9001: 2008 ihu ọma yana anyị nwekwara usoro nlekọta ọgbara ọhụrụ na sayensị nke na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu. Anyị na-agbaso ụkpụrụ ọrụ ndị a nke "Iji lanarị na Ebe E Si Nweta, Iji Mee Ka Ewee Uru Na-arụkọ Ọrụ, Iji Nwee Mgbakwunye Njikọ Aka, Progressga n'ihu na Innovation" na ịchọ ụkpụrụ dị mma nke "Zero Defect". Anyị ji ezi obi na-atụ ka mmeri-mmeri azụmahịa mmekọrịta gị dabere na magburu onwe ngwaahịa na zuru okè ọrụ iji nweta ibe uru na-emepe emepe!